Air Astana waxay dib u bilawday duulimaadyadii tooska ahaa ee Georgia
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Air Astana waxay dib u bilawday duulimaadyadii tooska ahaa ee Georgia
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Georgia War Cusub • Wararka Kazakhstan • News • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Sirta Safarka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Muwaadiniinta Kazakhstan ee u safraya Georgia waa inay soo bandhigaan shahaadada natiijada baaritaanka PCR diidmada ah ee aan ka badnayn 72 saacadood kahor imaanshaha
Air Astana ayaa dib u bilaabi doonta duulimaadyadii tooska ahaa ee u dhaxeeyay Almaty iyo caasimada Georgia ee Tbilisi
Rakaabka ka imanaya Kazakhstan ee ka yimid wadamada shisheeye waa inay haystaan ​​shahaadada PCR-ga ee diidmada ah ee la soo saaray oo aan ka badnayn 3 maalmood ka hor safarka Kazakhstan
Rakaabka transit-ka ee caalamiga ah ee ku safraya Kazakhstan looma baahna inay yeeshaan baaritaanka PCR
Air Astana waxay dib u bilaabi doontaa duulimaadyada tooska ah inta udhaxeysa Almaty iyo Tbilisi, caasimada Georgia, 16-kii Maarso 2021, iyadoo adeegyadu ay shaqeeyaan saddex jeer usbuucii maalmaha Talaadada, Jimcaha iyo Axadaha. Duulimaadka u dhexeeya Almaty iyo Tbilisi waa 4 saacadood iyo 15 daqiiqo, iyo 3 saacadood iyo 40 daqiiqo oo laga soo noqdo Tbilisi ilaa Almaty.
Rakaabka ka imanaya Kazakhstan ee ka yimid wadamada shisheeye waa inay haystaan ​​shahaadada PCR-ga ee diidmada ah ee la soo saaray oo aan ka badnayn 3 maalmood ka hor safarka Kazakhstan. Iyadoo aan la helin tijaabada PCR-ga, rakaabka looma oggolaan doono inay raacaan garoonka diyaaradaha. Rakaabka transit-ka ee caalamiga ah ee ku safraya Kazakhstan looma baahna inay maraan baaritaanka PCR haddii aysan ka bixin aaga ay ku sii socdaan garoonka diyaaradaha.
Muwaadiniinta Kazakhstan ee u safraya Georgia waa inay soo bandhigaan shahaadada natiijada baaritaanka PCR-ga ee aan ka badnayn 72 saacadood kahor imaanshaha.
Hawada Astana, sidaha calanka ee Kazakhstan, ayaa bilaabay howlaheeda bishii Maajo 2002 iyada oo ay si wada jir ah u wada galeen sanduuqa hantida qaranka ee Kazakhstan, Samruk Kazyna, iyo BAE Systems, oo leh saami dhan 51% iyo 49%.
Air Astana waa shirkad caalami ah iyo mid xambaarsan adeeg buuxa iyo qeybteeda qiimo jaban, FlyArystan ayaa si xawli ah ugu koraysa suuqa gudaha. Diyaaradda waxay shaqeysaa raxan ka kooban 33 diyaaradood oo ay ku jiraan Boeing 767, Airbus A320 / A320neo, Airbus A321 / A321neo / A321LR iyo Embraer E190-E2.
Daawada ka hortagga fayraska Oselavir® hadda waa la heli karaa
Shirkadaha safarka ah waxay isticmaalaan tignoolajiyada si ay si wax ku ool ah uga shaqeeyaan ...
Xaqiiqooyin xiiso leh, oo xiiso leh oo ku saabsan Kariibiyaanka